မောင်စေတနာ: တန်ပလိပ် လှလှလေးတွေ ယူရအောင်
တန်ပလိပ် လှလှလေးတွေ ယူရအောင်
ဘလော့ဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Template များစွာကို ရှာဖွေခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဆင်မပြေခဲ့တာ များပါတယ်။ Template တော်တော် များများဟာ Classic ပြောင်းပြီး တင်မှ ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ မိမိ ဖန်တီးချင်တဲ့ ပုံစံ တော်တော် များများကို ဖန်တီးလို့ မရကြတာ အားလုံးသိမှာပါ။
ယခု Template ၀က်ဆိုက်ကတော့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ မိမိ လိုချင်တဲ့ template ဒီဇိုင်းကို Click လုပ်ပြီး ပေးထားတဲ့ Code ကို ယူပြီး မိမိရဲ့ Edit HTML ထဲ past ချပြီး save လုပ်ရုံပါပဲ။ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ err လဲ တက်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကဲ ရိုးရှင်းတဲ့ template ကနေ ဆန်းသစ်တဲ့ template လေးနဲ့ ဘလော့များကို စတင်ကြစို့လားဗျာ။ ၀က်ဆိုက်ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
0 ယောက် မှတ်ချက်ပြုသည်:
My blog was born on October 23, in the year of 2007. Everybody knows me Blogger "Mg Say Ta Nar". Actually, I'm notaBlogger. And my real name is Zin Mg Mg. I do not have any "Computer Certificate". I live in Nay Pyi Taw . For the time being, I earnaliving with few salary.
သင်၏ အီးမေးလ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
Download Zawgyi-One Font
Download Zawgyi-One Keyboard
ဘလော့မှာ ဦး ရှိနေသည်။
မောင်စေတနာ. Powered by Blogger.